Shirkado Nadiif ah oo Nadiif ah Soosaarayaasha - Warshad
Masaxa masaxayaasha wax qurxiyo
Kabaha masaxa qoyan
Buufiyo gacmo nadiifiye
Saliida gacmaha nadiifisa
Maaskaro caadi ah
Aqoon isweydaarsiga wax soo saarka
Warshad tayo sare leh 80 ayaa tirisa Dusha sare ...
70% Alkohol Antibacterial Gel Hand Sanitizer ...
Yar oo la qaadan karo maalin kasta jeermiska jeermiska iyo antiba ...
Masaxa qoyan waxaa kujira fiitamiin E iyo C Supplement wajiga ...
Cunnuga la beddeli karo ee la nadiifin karo ayaa tirtiraa Qoyska ...
Warshad liin dhadhan jeermiga jeermiska jeermiska shaqsiyan ...
Dabiiciga hypoallergenic ammaan ah saaxiibtinimo 200 tiriyaa xayawaanka ...
Warshad jumlo sanduuq 100 ku tiriyey nadiifinta xayawaanka xayawaanka ...
Factory OEM awood weyn 750 tiriyaa multipurpose c ...
Si wax ku ool ah ayuu u yareeyaa bakteeriyada 75% Alkohol jeermiska ...
Qurxinta maqaarka jilicsan ee jilicsan ee jilicsan ayaa ka saaraya cleanin ...
Nadiifinta iyo qoyaanka fasiraadda qoraalada firfircoonaanta ...
Qoyaanka maqaarka ee maqaarka u fiican ee maqaarka u nugul ...
72 wuxuu masaxaa urka Carwada Guriga Nadiifi Masaxa Ilmaha
Wuxuu dilaa 99% jeermiska waxyeellada leh ee masaxa bakteeriyada
Nooca la beddeli karo 160 masaxa halkii qasacad 75% aal ...
Maaskarada ka hortagga ah ee loo yaqaan 'KN95'
Warshadda Lahabeyn Karo 75% Khamriga Degdega ah ee Bakteeriyada ...
Warshad jumlo jumlo ah oo 100 sanaac ah ayaa lagu tiriyaa nadiifinta bakteeriyada xayawaanka eeyaha iyo bisadaha
Ka dhig nadiifinta xayawaankaaga oo caraf udgoon maalin kasta.
Caanaha qafiifka ah ee maqaarka xayawaankaaga jilicsan.
Soothes qalalan & cuncun maqaarka.
Si badbaado leh ayuu u tirtiraa dandarka iyo urta xayawaanka adag.
Waxay ka caawisaa timaha kala baxa.
Dabiiciga hypoallergenic aaminka ah ee saaxiibtinimada leh 200 ayaa tiriya tirtiraha qoyan ee eyda iyo bisadaha
Caafimaad ahaan la caddeeyey inay ammaan u tahay eeyaha, hyoallergenic, aan qalajin iyo xanaaq la'aan; masaxaadani waa kuwo jilicsan oo ku filan xitaa maqaarka xasaasiga ah. Masaxa xayawaanka waxaa lagu sameeyaa maro adag oo aan ku jabi doonin, xitaa marka aad nadiifineyso eeyahaaga iyo bisadahaaga.
Cunnuga lagu beddeli karo ubadku waa masaxayaa Reerka Udgoon ma leh
Caanaha caadiga ah, oo aan udgoon lagu darin, caafimaadka u leh ilmaha. Ku maydh dhar aan tolmo lahayn, jilicsan oo maqaarka u roon, daryeela maqaarka ilmahaaga. Maskaxda gacmaha iyo afka waa badbaado oo saaxiibtinimo, taas oo ka dhigaysa ilmaha caafimaad qab iyo fayadhowr badan.
Masaxyada qoyan waxay ka kooban yihiin fiitamiin E iyo C Supplement nafaqada wajiga ka saarista qurxinta wax ku oolka ah
Waxyaabaha dabiiciga ah ee wax lagu tirtiro waxyaabaha lagu qurxiyo, fuuq-celinta jilicsan, ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa maqaarka xasaasiga ah. Mashiinka masaxayaasha wax lagu nadiifiyo ayaa si fudud u baabi'in kara dhammaan waxyaabaha la isku qurxiyo wuxuuna nadiifiyaa wejiga oo dhan.
Warshadda OEM Wash Car Dashboard Gudaha Daryeelka Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Nadiifinta Gawaarida Gawaarida
Bakteeriyada lidka ku ah ee soo nooleyneysa vinylka gudaha, Rubber & Caaga.
Gawaarida iyo Darawalka gudihiisa waxay ilaalinayaan masaxa qudhaanjada waxay gacan ka geysaneysaa soo celinta midabka dabiiciga ah iyo dhalaalka gaarigaaga. Waxay ka ilaaliyaan gaarigaaga gudihiisa inuu sii yaraado, dillaaco iyo inuu midab doorsoomo iyadoo ay ugu wacan tahay UV-ga tooska ah, ozone, oksaydhka iyo soo-gaadhista heerkulka xad-dhaafka ah.
Warshad tayo sare leh 80 tirisa tiro badan Nadiifinta nadiifinta bakteeriyada
Taageerada baakadaha gaarka ah, qeexitaannada qaaska ah, qaaciidooyinka caadiga ah, masaxa jeermiska jeermiska. Jumlad qiimo jaban. Dhar tayo sare leh oo aan tolmo wanaagsan lahayn.
Summadaha Customizable 160 tirtiro halkii qasacad 75% masaxda aalkolada
Loogu talagalay in laga madax baneeyo kiimikada adag, hadana ku adag jeermiga! Badbaadi adiga oo tirtiraya jeermiska iyo bakteeriyada sababi karta cudurada gacmaha inta lagu jiro iyo ka dib markaad joogto dukaamada, maqaayadaha, xafiisyada, fasalada, jimicsiyada, jikooyinka, qolalka, inta lagu jiro safarka, iyo inbadan.
Yar oo la qaadan karo maalin kasta jeermiska jeermiska iyo masaxa bakteeriyada
Jeermiska jeermiska dila wuxuu si wax ku ool ah u dilaa 99.9% bakteeriyada. Khamiirka cagaaran ee shaaha cagaaran wuxuu leeyahay saameyn gaar ah dib udhaca gabowga. Ma dhaawacayo gacmaha iyo maqaarka. Baakad yar, oo fududahay in la qaado.
Jilicsan nadiifinta jaakada masaxa qoyan leh dhar tayo sare leh oo aan tolmo wanaagsan lahayn
Jaakadaha nadiifinta jaakada hoose, looma baahna in la dhaqo, masaxo noocyo kala duwan, ilaaliyaha gacmuhuna ma waxyeeleeyo dharka, si sahlan loo qaado, wuu iska ilaalin karaa xishoodka wakhti kasta iyo meel kasta! Ma dhaawaceyso maaddada, kama tagayo astaan-biyood, waana sahlan tahay in lagu isticmaalo xirmo yar.
Liinta dhadhanka jeermiska warshad jeermiska jeermiska daryeelka shakhsi ahaaneed ee jeermiska qoyan ee bakteeriyada
Masaxa antibacterial wuxuu si wax ku ool ah u dili karaa 99.9% bakteeriyada wuxuuna ilaalin karaa badbaadada iyo caafimaadka nolosha. Si dhakhso ah oo fudud gacmaha loo nadiifiyo. Ka madax banaan kiimikada adag.
Aqbal aqal-nadiifiyaha muraayadda Gawaarida lagu nadiifiyo masaxa maqaarka
Waxaa loo adeegsaday tirtirka muuqaalka gaariga, qurxinta gudaha gaariga, muraayadda gadaal, muraayadda qalabka guriga, iwm.
Habee si fudud waxtar leh u nadiifi masaxyada kabaha cad iyo maqaar
Nadiifi, nafaqee oo iftiim masaxa kabaha. 40 tirtiro qoyan halkii qasacad. Cabirka tirtiraha qoyan waa 16 * 16cm. Lablaab isku laaban, oo qaro weyn oo aan dun lahayn.
Cinwaanka: No. 908, Academician Road, Fenshui Town, Tonglu County, Hangzhou City, Gobolka Zhejiang, Shiinaha
Dhar aan tolmo lahayn oo aan tolmo lahayn
Sanadka waalan ee adduunka aan tollayn ...
Qalabka ayaa cirka isku shareeray. Baafin doonaa ...
Waraaqaha guriga ee Shiinaha iyo sanatar ...
Sidee loo doortaa masaxayaasha ilmaha?
Si aad ula shaqeysid soo saarahaaga ku habboon, fadlan noo dhaaf e-maylkaaga waxaanan kula soo xiriiri doonnaa 24 saacadood gudahood.